Dhacdooyinkii ka hor intayna bilaabmin diwaan galinta Borama | Somaliland.Org
October 28, 2008	degdeg talada loo gooyo een dabada loo faydin da’yartiyo duqaydiyo hadaan dumarka loo yeedhin
markay dubato haylaaman iyo dacartu miirmayso
Alahayoow maxaa daal u yaal diifatiyo ciilba.
London-Iyada oo ay dhacdooyin badani ka danbeeyeen mudadii aan kasoo baxay Boorama oo sadex cisho imika laga joogo ayaan hadana rabaa in aan qayb qayb usoo gudbiyo waxyaalihii aan ku arkay Boorama iyo waliba dalka intiisa kale waxanan ku bilaabayaa diwaangalinta iyo waxyaalihii ku saabsanaa doorashooyinka soo socda. Iyadoo ay ahayd markii labaad ee aan sanadkan tago Boorama ayaan waxan joogay Boorama mudo sadex iyo labaatan cisho ah waxanan kasoo baxay bishan obtober sadex iyo labaatankeedii oo ku beegnayd maalintii ay dawaangalintu ku sheegu ka bilaabantay gobolka Awdal aniga oo wakhtigaa ku mashquulsanaa dano shaqsiyadeed una waayay waqti aan warbixin iyo waxaan ku arkay dalka soo diro. Hadaba waxa intaan joogay Magaalada aad looga dareemayay sawaxanka iyo makarafoonada codka dheereeya oo saarnaa babuur ku wareegayay xafadaha dhexdooda baabuurtaasi waxay dadka u sheegayeen in ay tegaan meelaha laga soo qaato waraaqaha loogu talagalay in lagu footeeyo iyo in loo diyaar garoobo diwaan galinta . waxana erayadooda ka mid ahaa ha ladoonto waraaqa iyo waa mihiim in aad is diwaan galiso. Waxa kaloo gawaadhida ka baxayay heeso aad loo dalacay. Markaan dadka xaafadaha dagan waydiiyay waxa ay tahay waxan loogu yeedhayi qofwalba si ayuu u macneeyay.
Qaar waxay yidhaahdeen waa diwaangalin oo dadkaa la tira koobayaa qaarna waxayba yidhaahdeen waa la footaynayaa. kuwa kalena waxay yidhaahdeen waaraaqaha codka lagu bixin doono ayaa loogu yeedhayaa dadka. Sikastaba ha ahaatee waxay umuuqataa dadka Boorama ku dhaqani in aanay haysan wacyi galin kufilan. Waxa taa kasii daran iyada oo meelaha waraaqaha laga qaadanayay nidaamkoodu aad u liitay. Tusaale ahaan aniga iyo sadex wiil ayaa waxan tagnay shan iyo toban kii October meel kamida meelaha waraaqaha lagu bixinayay oo loo yaqaan kaalmada kuna taal xaafada aan daganaa oo u dhaw jeelka waana intii aanay diwaangalintu bilabbing ayse socotay wax lagu tilmaamay qaadashada waraaqaha foodka loogu tala galay, waxanan halkaa ugu tagnay laba wiil oo aad u da,yaryar. Kuwaasi oo u muuqday kuwo aan haysan cid hagta.
Waxyaalaha wiilashan yaryar ee wax qorqorayay ay samaynayeen waxa ka mid ahaa iyaga oo mid ka mid ahi uu magacda dadka qorayay isagoo waliba sicad u diidayay in uu qofka u yimaada uqoro wax ka badan labo qof oo qoskiisa kamida. Halka kakale ee garafadhiyayna uu formamka bixbixinayay. Dadka shicibka ee muwaadiniinta ah ee meeshaa imanayay oo tiradood marka horaba aad uyarad ayaa iyagu ahaa kuwo aan kuba siiraagayn markay arkaan nidaam xumada iyo sida daciifka ah ee ay hawshu usocoto. Hadaba mar aan wax kawaydiiyay wiil kamida wiilasha wax qorqorayay oo fadhiyay meeshaa looyaqaan kaalmad magaciisana iigusheegay Axmad ayaa isaga oo karahsan su aalahayaga iyo kuwa dadka kale waydiinayaanba waxa uu noogu jawaabay anagu intii karaankayaga ahayd waan wadnaa, ee hadaad idinku wax qabanaysaan kalaya oo fadhiista. Midkale oo kamida ahina wuxu raacshay walaahiney faruhu ini daalayaan. Waxan ugu jawaabay saaxiibayaal hadii aydaan qaban karayn hawsha miyaad usheegtaan dadka idin soo diray. Axmad oo ahaa kii wax qorqorayay ayaa eraygii ka xanaaqay wuxuna iigu jawaabay hadal baad haysaa. dadkii meesha joogay oo dhan ayaa markaliya uwada jawaabay yarkii waxayna yidhaahdeen waar waa rune aaway masuuliyiintiinii. Hadaba nidaam xumada kajirta meelahan waraaqa lagu bixinayo oo dhaawac wayn iyo xaqiraad iyo dadyari usoo jiidi doonta gobolkan ayaa u eg mid loogu talagalay in aanay dad sidaa ubadaniba ka soo bixin gobolkan.
Iyada oo waraaqahan waqtigaa lagu tilmaamay in ay ahaayeen oo kaliya kuwa doorashooyinka ayna danbaysay tii tira koobka oo hada bilaabantay waxa hubaala marka laga taamilo qaato taa hore sida ay usocotay in ay tan danbana usocon doonto si kasii liidataba hadaan wax laga qaban. Mida kale dad badan ayaanan kalaba fahamsanayn waqtigaa waxa waraaqaha ay qadanayeeni ahaayeen. Waxana taa dheer daka oo ku mashquulsanaa danahooda gaarka ah awgeed siiba haweenka iyo dadka waaweyn ayaa u ekaa kuwo lagu adkeeyay siyaabah la isku diwaangalin karo sobobtoo ah hooyada caruurta haysata ma awoodo in fayl aroorta ugasho diwaangalin taasna wax u sahlilahaa iyada oo xaafadaha iyo guryaha ay daganyihiin loogu tago lagana soo qorqoro magacdooda halkaana lagu diwaangaliyo. Dadka waaweyna sidoo kale. Hadaba nidaam iyo dhiiri galin maaha gawaadhi badrool laga buuxsado oo suuqa siigo kiciayaa ee waa in dadka loo dhibyareeyaa nidaamka wax loo qor qorayo, shaqaale badana goobaha loogu tala galay waa in loo dhigaa.Lasoco faalooyinka danbe iyo waxaan ku soo arkay Boorama iyo dariiqii aan maray oon eexasho lahayn. Cabdale Farah Sigad